Lammaa Magarsaa:' 'Qaamni maqaa WBOn socha'aa jiru saffisaan dhaabuu qaba'' - BBC News Afaan Oromoo
Haaromsameera 30 Onkololeessa 2018
Qaamni maqaa waraanaa ABO tiin hidhatanii godinaalee Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaatti Uummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsuu qaba jedhan Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantiin Bulchinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa.
Midiyaaleen biyya keessaa akka gabaasaniitti, Mootummaan gocha kana obsa guddaan ilaalaa ture kan jedhan Obbo Lammaan, ammaan booda nageenya uummataatii fi heera kabachiisuuf ni hojjennas jedhaniiru.
Kanaafuu, ummanniifi jaarsoliin biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiyeessuun gara nagaatti akka deebi'an gahee isaanii bahuu qabuus jedhaniiru.
Kana malees Pireezidaantiin MNO Lammaa Magarsaa fi Preezidantiin MN Beenishaangul Gumuz Ashaadilii Hasan, rakkoo nageenyaa daangaa naannoolee lamaanii irratti mullatu haala furuun danda'amu irratti mar'iachuun waliigaluu isaanis miidiyaaleen gabaasaniiru.
Qeellam Wallaggaatti maaltu ta'e?
Gabaasa keenya kalleessatiin ammoo, wal waraansa loltoota raayyaa ittisa biyyaa fi waraana Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jira jedhamuun, miidhaan qaqqabera jechuun jiraattoonni BBC'tti himanii turan.
Sababuma kanaanis jiraattonni Aanaalee Beegii fi Gidaamii baqachaa akka jiranis jiraattonni dubbataniiru.
Kaleessa galgala Aanaa Beegii keessatti waraanni adeemsifamaa kan ture yommuu ta'u, har'ammoo gara Aanaa Gidaamitti cehuusaa jiraataan BBC'n dubbise tokko himeera.
Jiraataan Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamiirraa ganama kana BBCtti bilbilaan wayita dubbatu, duubarraan sagalaeen dhukaasaa dhagahamaa ture.
Akka jiraataan kun jedhanitti, boombii dabalatee dhukaasa meeshaalee waraanaa gosoota garagaraa dhagahaa akka jiran dubbateera.
''WBO dhahanii jalaa goraniiru. Amma jarumatu [waraana mootummaa] dhukaasaa jira. Uummannis horii fi mana gadhiisee baqatee jira. Amma bakkee teenyee ilaalaa jirra,'' jedha.
Loltoonni mootummaas konkolaataa waraanaa Oraal jedhamu jahaan akka galanis jiraataan kun ni dubbatu.
Bulchaa Godina Qeellam Wallaggaa kan ta'an Obbo Taammanaa Haayiluu gamasaaniitiin, haala godina isaanii jiru yeroo ibsan dhimma mootummaafi Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti gaaffii hidhannoo hiikkachiisuun walqabatee gaaffiin xiqqoo jiruun mormiitu jira jedhan.
Mormii sana irraa kan ka'een ammoo, 'Humni gara keenyatti hin dhufu,'' kan jedhuun hiriirri bakka tokko tokko jira ture jedhan bulchaan kun. Akka Obbo Taammaneen jedhanitti hiriirri ture sun nagaadhaan xumurameera.
Waraanni WBO fi humna ittisa biyyaatti gaggeeffamaa jira jechuun jiraattonni naannoo kan dubbatan yeroo deebisan, ''godina keenya keessa waanti tokkoyyuu hin jiru'' jedhan.
"Har'as ta'e Sanbattan darbe godina keenya keessa WBO fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu waraanni hin turre," jedhu.
Gama biraatin ammoo Meedikaal Daarektarri Hospitaala Dambii Doolloo Dr. Kibrat Waaggaarii akka jedhanitti, miseensoonni poolisii sadii ta'an dhukaasa boombiin miidhamanii hospitaalichatti yaalamaa akka jiran BBCtti himaniiru.
Dubbii himaan Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) Obbo Toleeraa Adabaa immoo odeeffannoo hinqabu jechuun BBC'tti himaniiru.
''Ammattii waanan jechuu danda'u homaatu hinjiru. Adda baafadhe odeessa gahaa yeroon argadhu boru naaf bilbilaa,'' jedhaniiru.
Daqiiqaa 19 dura